विदेशी विनिमय शाखामा पुुनः ढुुंगाना, राष्ट्र बैंकमा फेरि पुरानो भीएलएनकाण्ड दोहोरिने सङ्केत ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
विदेशी विनिमय शाखामा पुुनः ढुुंगाना, राष्ट्र बैंकमा फेरि पुरानो भीएलएनकाण्ड दोहोरिने सङ्केत !
प्रकाशित मिति १९ चैत्र २०७४, सोमबार २१:३० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुुंगानाको सरुवा पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय शाखामा भएको छ । यसअघि झण्डै सात वर्ष उक्त शाखामा बसेका ढुंगाना केही समयअघि मात्र सरुवा भएर योजना शाखाको प्रमुुख भएर गएका थिए ।
तर उक्त शाखामा सात महिना पनि टिक्न नसकेका ढुुंगानालाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नै काखी च्यापेर पुुनः विदेशी विनिमय विभागमा ल्याएको दाबी राष्ट्र बैंक स्रोतले गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय शाखालाई आकर्षक शाखाको रुपमा लिइँदै आएको छ । विगतमा ढुुंगाना नै उक्त शाखामा प्रमुख रहेको बेला भीएलएन नेपालले नेपाल हङकङ हुुँदै मलेसियामा आठ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगेको थियो । उक्त समय ढुुंगानाले नै आर्थिक प्रलोभनमा परेर नियमविपरीत रुपमा भीएलएनलाई रकम स्थानान्तरण गर्नको लागि बाटो खुल्ला गरिदिएका थिए । तत्कालीन समयमा उक्त घटनाबारे केही सञ्चारमाध्यममा समाचार समेत प्रकाशन भएपछि डेपुुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले ढुुंगानालाई विभागीय कारबाही गर्नुुपर्ने अडान लिएका थिए । तर त्यतिबेला पनि गभर्नर डा. नेपालले नै काखी च्यापेर ढुुंगानालाई कारबाही गर्न रोकेका थिए ।
तर अहिले एक्कासि ढुुंगानालाई पुुनः सोही विभागमा सरुवा गरेर ल्याउनुुले फेरि गोप्यरुपमा कुुनै कम्पनीलाई विदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्नको लागि बाटो खुुल्ला गरिदिन पनि हुुनसक्छ, राष्ट्र बैंक स्रोतले भनेको छ । होइन भने एउटा विभागमा झण्डै सात वर्ष बसेर सरुवा भएका व्यक्तिलाई पुुनः सात महिनापछि त्यही विभागमा प्रमुुखको रुपमा किन ल्याइन्छ, राष्ट्र बैंक स्रोतको प्रश्न छ ।
स्रोतका अनुसार विगत लामो समयदेखि मलेसियामा जाने नेपाली कामदारबाट निजी कम्पनी भीएलएन नेपालले अवैधानिक रुपमा प्रतिकामदार तीन हजार २०० अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको छ । । प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने भन्दै यसरी रकम उठाइएको हो । मलेसिया र नेपालका निश्चित स्वार्थ समूहबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने योजनाअनरुप भिलएलएनले मलेसिया जाने प्रतिनेपाली कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको दरमा रकम उठाइरहेको छ । यसरी उठाइएको रकम अवैधानिक रहे पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन ढुुंगानाकै कारण भीएलएनले वर्षेनी नेपालबाट विभिन्न मुुलुक हुँुदै मलेसियामा पैसा लगिरहेको छ ।
मलेसिया र नेपालका निश्चित स्वार्थ समूहबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रम सरकारको कमजोरीका कारण नेपाल प्रयोगको माध्यम बनिरहेको छ । यी कार्यक्रम नेपालमा लागू भएको देखाएर अन्य मुलुकमा लागू गर्न दबाब दिन यस्ता समूह उद्यत छन् । नेपाल सरकारले लिखित रुपमा मलेसिया सरकारलाई यी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैनौँ, कामदारलाई थप आर्थिक भार प¥यो भनेर चिट्ठी लेखेर अवैधानिक रुपमा लिइने यस्ता शुल्कलाई कटौती गर्नुु आवश्यक रहेको छ । यसअघि सन् २००५ मा भीएलएन नै जस्तै गरी मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि माम्का र तालिमका लागि छुट्टै संस्था खोलेर अहिलेकै जस्तो कामदारबाट आर्थिक शोषण गर्ने गरिएको थियो ।
एकै पटक सय जनाभन्दा बढीको सरुवा
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै पटक एक सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चैतको पहिलो साता एक सय जना उपनिर्देशक तथा सहायक निर्देशकहरुको सरुवा गरेको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार नरेन्द्र विष्टलाई विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट नियमन तथा सुुपरिवेक्षण विभागमा सरुवा गरिएको छ । यसैगरी शुुष्मा रेग्मीलाई राष्ट्र बैंक ऋण व्यवस्थापन विभागमा, रुद्र बहादुर घिमिरेलाई सामान्य सेवा विभागमा, राजन विक्रम थापालाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा, राजेन्द्र भट्टराईलाई विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा र हिमप्रसाद न्यौपानेलाई अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको छ । यो सरुवामा गभर्नर डा. नेपालको विशेष स्वार्थ र चासो देखिएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्‍द्वारा यी पाँच आयोगको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले ५ वटा संवैधानिक आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्को आइतबारको बैठकले प्राकृतिक…
नेपाली संस्कृतिमा वियर पिउनुलाई राम्रो मानिदैन । बियरलाई मादक पदार्थका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । बियर पिउनु वा नपिउनु तपाईंको…
काठमाडौ । यौन जिज्ञासा र समाधान शीर्षकमा हाम्रो पेजको इन्बक्समा जिज्ञासा राख्ने नाम परिवर्तित प्रेम जी तपाईले यौन सम्पर्कमा…
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) को चमेना गृह भाडामा दिन आह्वान गरिएको टेण्डरमा मोटो रकमको चलखेल भएको…
आज २०६ औं भानु जयन्ती, विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै
काठमाडौं । नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०६ औं जन्मजयन्ती आइतबार देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा समेत विविध कार्यक्रमको…
मेजर प्रभवविक्रम शाह घरमा काम गर्ने वालिकासँग अप्राकृतिक यौन अपराधमा पक्राउ
काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले बाल यौनदुराचार आरोपमा एक मेजर तहका सैनिकलाई पक्राउ गरी नेपाली सेनालाई बुझाएको छ…